prime commercial bank(prime commercial bank) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
ज्योतिले उच्च सेयर स्वाप अनुपात मागेपछि प्राइमसँगको मर्जर छलफल निश्कर्षविहीन
काठमाण्डौ । ओम डेभलपमेन्ट बैंकसँगको प्राप्ति(मर्जर) भाँडिएपछि प्राइम कमर्सियल बैंक मर्जर पार्टनरको खोजीमा छ । सोही क्रममा केही साना संस्थालाई गाभ्ने निर्णयमा पुगेको यो बैंकले राष्ट्रिय स्तरको ज्योति विकास बैंकलाई समेत मर्ज गर्ने प्रयास गरेसँगै दोश्रो बजारमा ज्योतिको मूल्य बढ्यो । निकै राम्रो सेयर स्वाप अनुपातमा ज्योति र प्राइमबीच...
प्राइमले बोलायो साधारणसभा, बुक क्लोज मिति पनि तय
काठमाण्डौ । ओम डेभलपमेन्ट बैंकसँगको एक्वीजिसन प्रक्रियामा पूर्णविराम लागेपछि प्राइम कमर्सियल बैंकले वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । प्राइमको बैशाख ३१ गते साँझ ६ बजे बसेको संचालक समितिको ३६२ औं बैठकले जेठ २६ गते बैंकको ११ औं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकले साधारणसभा प्रयोजनका लागि जेठ ९ गतेदेखि बुक...
प्राइम बैंकले १४% सम्म लाभांश बाँड्नसक्ने, खराब कर्जामा डरलाग्दो बढोत्तरी
काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमीटेडले चालु आर्थिक वर्षका लागि सेयरधनीलाई १४ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्नसक्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमाससम्म यो बैंक १ अर्ब वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गरेको हो । हाल यो बैंकको चुक्तापुँजी ८ अर्ब ३ करोड रहेको छ। बैंकले गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य मुनाफाबाट लगानीकर्तालाई १६...
प्राइम-ओम मर्जरमा आशाको किरण, राष्ट्रबैंकले दियो बैशाखसम्मको समय
काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई नेपाल राष्ट्रबैंकले मर्जरका लागि थप प्रयास गर्न भन्दै समय थपिदिएको छ । यी दुई बैंकबीच जारी मर्जर असफलतातर्फ उन्मुख भएपछि दुवै बैंकले केन्द्रीय बैंकलाई गुहारेका थिए । दुवै बैंकका प्रतिनिधिलाई बोलाएर राष्ट्रबैंकले छलफल गरेको थियो । सो क्रममा सानातिना असहमतिहरु पन्छाएर...
विद्यालयलाई प्राइम बैंकद्वारा ६० डेक्सबेञ्च उपलब्ध
काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमीटेडले काभ्रेको एक विद्यालयलाई ६० वटा डेक्सबेञ्च हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रदेश नं. ३, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, रोेशी गाउँपालिका मंगलटार स्थित मंगल जनबिजय क्याम्पसका बिद्यार्थीहरुलाई अध्ययनमा सुबिधा पुर्याउने उद्देश्यले शनिवार एक कार्यक्रमका...
दोश्रो त्रैमासमा प्राइम बैंकको खूद नाफा पहिलोपटक १ अर्ब माथि
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा प्राइम कमर्सियल बैंकले १ अर्ब बढी खूद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३३.९१ प्रतिशतले खूद नाफा बढाउँदै १ अर्ब ६ करोडको उचाईमा पुर्याएको छ । अघिल्लो वर्षको बैंकको खूद नाफा ७९ करोड २२ लाखमा सीमित थियो । बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ९३ करोड ४२ लाखको उचाईमा पुगेको छ ।...
प्राइम-ओमबीचको मर्जरको म्याद सकियो, बल अब राष्ट्रबैंकको कोर्टमा !
काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकबीचको जारी मर्जरको म्याद सकिएको छ । मर्जरका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकबाट लिएको म्याद सकिएसँगै दुवै बैंकले एक महिना म्याद थप्न अनुरोध गर्दै राष्ट्रबैंक गुहारेका छन् । जारी मर्जर प्रक्रियाका केही विषयमा तिक्तता बढेसँगै यी दुई बैंकको मर्जर धरापमा परेको छ । एक महिनाअघि नै दुई बैंकबीच...
प्राइम र ओमबीचको मर्जर भाँडिने अवस्थामा, कारण यस्तो छ
काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमीटेड र ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमीटेडबीचको जारी मर्जर प्रक्रिया भाँडिने संभावना बढेको छ । केही विषयमा तीव्र विवाद उत्पन्न भएसँगै मर्जरसँग सम्बन्धित काम पनि अहिले ठप्प भएका छन् । प्राइमले ओमलाई गाभ्ने विषयमा भदौ ३ गते सम्झौता भएको थियो । मर्जर सम्झौताको ५ महिना भन्दा बढी समयपछि भाँडिने अवस्था सिर्जना...
सिन्धुलीको फिक्कलमा प्राइम बैंकको शाखा
काठमाण्डौ । शाखा सञ्जाल बिस्तारको क्रममा शुक्रबार प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकामा शाखाको शुभारम्भ गरेको छ । यस शाखाको संचालन पछि बैंकको शाखा कार्यालय संख्या ७२ पुगेको छ । स्थानीय उद्योगी, व्यवशायी, शिक्षक, समाजसेवी तथा विभिन्न पेशाकर्मीहरुको उपस्थितिमा एक समारोहका बीच फिक्कल गाउँपालिका अध्यक्ष...
उदयपुरको ताप्लीमा प्राइम बैंकको शाखा
काठमाण्डौ । शाखा सञ्जाल बिस्तारको क्रममा प्राइम कमर्सियल बैंक लिमीटेडले उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिकामा समेत शाखा स्थापना गरी शुभारम्भ गरेको छ । योसहित बैंकको शाखा कार्यालय संख्या ७१ पुगेको छ । स्थानीय उद्योगी, व्यवसायी, शिक्षक, समाजसेवी तथा विभिन्न पेशाकर्मीहरुको उपस्थितिमा बुधबार एक समारोहका बीच ताप्ली गाउँपालिका अध्यक्षे...
पाँचथरको तुम्बेवामा प्राइम बैंकको शाखा
काठमाण्डौ । प्राइम कमर्सियल बैंकले सोमबार पाँचथरको तुम्वेवा गाउँपालिकामा शाखाको शुभारम्भ गरेको छ । यस शाखाको संचालन पछि बैंकको शाखा कार्यालय संख्या ७० पुगेको छ । स्थानीय उद्योगी, व्यवशायी, शिक्षक, समाजसेवी तथा विभिन्न पेशाकर्मीहरुको उपस्थितिमा एक समारोहकाबीच तुम्वेवा गाँउपालिका अध्यक्ष होमनाथ थापाले शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरे...
पाँचथरको फालेलुङमा प्राइम बैंकको शाखा
काठमाण्डौ । शाखा सञ्जाल बिस्तारको क्रममा बिहीबार प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकामा शाखाको शुभारम्भ गरेको छ । यस शाखाको संचालनपछि बैंकको शाखा सञ्जाल संख्या ६९ पुगेको छ । स्थानीय उद्योगी, व्यवशायी, शिक्षक, समाजसेवी तथा विभिन्न पेशाकर्मीहरुको उपस्थितिमा एक समारोहका बिच फालेलुङ गाँउपालिका अध्यक्ष...
तारकेश्वरमा प्राइम बैंकको शाखा
काठमाण्डौ । आफ्नो शाखा सञ्जाल बिस्तारको त्रममा सोमबार प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकामा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको छ । योसहित बैंकको शाखा संख्या ६८ पुगेको छ । स्थानीय उद्योगी, व्यवसायी, शिक्षक, समाजसेवी तथा विभिन्न पेशाकर्मीहरुको उपस्थितिमा एक समारोहका बीच नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर ...